7 Arrimood Oo Aan La Sameyn Markaad Gabar La Hadleyso | Aayaha
Home XIRIIRKA IYO GUURKA 7 Arrimood Oo Aan La Sameyn Markaad Gabar La Hadleyso
Rag badan ayaa khaladaad badan sameeya inta ay dumarka la sheekaysanayaan. Wadahadal xumi wuxuu sabab u noqon karaa inaadan waligaa helin haweeneyda aad jeceshahay.
Hoos ka akhriso 7 waxyaabood oo aan la sameynin intaad la hadlaysid haweeney.
1. Iska ilaali muranka
Rag badan ayaa dumiya wada sheekeysiyada ay la leeyihiin haweenka iyagoo si joogto ah u dooda. Waqtigaas ayaa ah waqti muhiim ah oo la wada sheekeysto ee ma ahan waqti la murmo.
Maaha inaad markasta inaad isla saxnaato markaa iska ilaali inaad sheekooyinka u rogto dood aan dhammaad lahayn. Wadahadal lala yeesho haween ma aha waqtiga ugu habboon ee lagu muujiyo xirfadahaaga doodaha. Iska ilaali muranka.
2. Dhageysi la’aan
Ragga qaar waxay yaqaanaan sida loo sameeyo wada sheekeysi inay tahay hadal aan dhammaad lahayn; marna ma nastaan si ay u dhageystaan haweeneyda ay sheekada la wadaagayaan.
Wada sheekeysiga waa inuusan noqon mid hal dhinac ah. Noqo dhageyste wanaagsan oo ha iska dhigin qof wax dhageysanaya adigoo aanan dhageysaneyn.
Weydii su’aalo xiiso leh inta lagu guda jiro wadahadalka maxaa yeelay tani waxay gacan ka geysaneysaa wadahadalka ka imanaya labada dhinac inuu si wanaagsan u socdo. Sidoo kale isku day inaad fahanto aragtideeda.
3. Ereyo dhaar ah
Markaad waqti la qaadaneysid ragga asxaabtaada ah, waa wax caadi ah inaad adeegsato ereyo dhaar ah laakiin iska ilaali inaad adeegsato ereyo dhaar ah markaad la sheekaysanayso haweeney.
Baro inaad ka fogaato ereyada dhaarta marka aad la sheekeysaneyso iyada ama wada sheekeysigaaga ugu horeeya ee aad la yeelaneyso haweeneyda wuxuu noqon karaa wadahadalkii ugu dambeeyay ee aad la yeelato iyada.
4. Su’aalo aanan loo baahneyn
Iska ilaali inaad weydiiso su’aalo aanan loo baahneyn inta aad wadasheekeysaneysaan.
Su’aalaha aanan loo baahneyn ama la dhibsado sida “maxaad u guursan weyday oo aad weli kali u tahay” waa in laga fogaadaa.
Iska ilaali inaad dareensiiso inaad su’aalo u weydiiso sidii eedeysane oo kale. Hal su’aal oo khaldan oo la waydiiyo ayaa kaliya burburin karta wada sheekeysiga.
5. Xiriirka indhaha
Waxaad ula muuqaneysaa iyada nin aan kalsooni isku qabin marka aadan ilaalin xiriirka indhaha inta lagu jiro wadahadalka. Markaad iska ilaaliso inaad indhaha ku heyso iyada, waxaad dareensiineysaa inaad ka baqeyso inaad eegto.
Baro inaad iisdajiso; isha ku haay adigoo dhoola cadeeynaya.
6. Laguma maqli karo
Waad baabi’ineysaa wada sheekeysiga marka aanan lagu maqli karin isla markaana aad hadalka boobsiiso.
Tani waxay dishaa wadasheekeysiga. Baro inaad si tartiib ah oo la maqli karo aad u hadashid intaad la sheekeysaneyso haweenka.
7. Kaligaa ayaad iska hadashaa
Haka dhigin wada sheekeysiga mid adiga kugu saabsan kaliya. Haweeneyda aad la sheekaysanayso ka dhig mid dareenta inay muhiim tahay iyadoo iska hadleysa.
Wadahadalka waa inuusan kaligaa kugu saabsanaan.
Previous articleWhat you may not know about life insurance
Next articleWaxyaabaha Ay Haweeneydu Maskaxda Ku Heyso Markay Ogolaato Inay Xaaskaaga Noqoto